अस्पताल Cubicle पर्दा
रोगी र मातृत्व लुगा
सबै भन्दा सार्वजनिक स्पेस प्रयोग कपडे (थप, अस्पताल, नर्सिंग, विद्यालय, चर्च auditoriums, थिएटर र सहित।) लौ retardant रूपमा प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। विभिन्न देशहरूमा ज्वाला retardancy बारेमा विभिन्न स्तर छ।
बेलायत: बी 5867-2: पर्दे र drapes लागि कपडे लागि Flammability परीक्षण
एक टाइप गर्नुहोस्:
यो कपडा अघि र सफाई पछि परीक्षण गरिएको छ।
एक कपडा नमूना एक धातु फ्रेम मा ठाडो राखिएको छ। धातु फ्रेम दुई मापन मार्कर छ। एक ज्वाला लागि कपडा सतह लागू हुन्छ 10 सेकेन्ड.
परिणाम: द कपडा यो FR मानक यदि बित्दै:
1) को पहिलो मार्कर ज्वाला द्वारा severed छैन;
2) को ज्वाला धातु फ्रेम को किनाराको गर्न मार्फत बाल्न छैन।
यो कपडा अघि र सफाई पछि (परीक्षण छ 12 चक्र मा 75 ° C बी एन आईएसओ 10528 मानक धुलाई प्रक्रिया को र त्यसपछि लाइन सुकेको)।
एक कपडा नमूना एक धातु फ्रेम मा ठाडो राखिएको छ। एक ज्वाला लागि कपडा सतह लागू हुन्छ 15 सेकेन्ड.
1) को ज्वाला धातु फ्रेम को किनाराको गर्न मार्फत बाल्न गर्दैन;
2) .त्यहाँ कुनै बलिरहेको थोपाहरूद्वारा छन्।
प्रकार सी (उच्चतम मानक):
यो कपडा अघि र सफाई पछि परीक्षण गरिएको छ। ( 50 चक्र मा 75 ° C बी एन आईएसओ 10528 मानक धुलाई प्रक्रिया को र त्यसपछि कम गर्मी र त्यसपछि सुकेको लडनु।)
एक कपडा नमूना एक धातु फ्रेम मा ठाडो राखिएको छ। एक ज्वाला लागि कपडा सतह लागू हुन्छ5सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड र 30 सेकेन्ड.
1) को पछि ज्वाला र afterglow 2.5 सेकेन्ड अधिक छैन;
2) को ज्वाला धातु फ्रेम को किनाराको गर्न मार्फत बाल्न गर्दैन;
3) .त्यहाँ कुनै बलिरहेको थोपाहरूद्वारा छन्।
LONGWAY ज्वाला retardant पर्दा कपडा अनुपालन BS5867-2 प्रकार सी आवश्यकताहरु।
संयुक्त राज्य अमेरिका: NFPA 701
NFPA (अमेरिका राष्ट्रीय आगो संरक्षण संघ) को कपडा प्रयोग गरिनेछ कसरी आधारमा विभिन्न स्तर छ। Draperies, पर्दे र त्यस्तै झुन्डिएको कपडा को मामला मा, लागू मानक छ NFPA 701 : कपडा र चलचित्रहरू को ज्वाला प्रसार को लागि आगो टेस्ट को मानक तरिका.
NFPA 701 परीक्षण विधि एक (700gsm भन्दा कपडे लागि उपयुक्त कम वा 21oz / वर्ग यार्ड ): नमूनों 45 सेकेन्ड को लागि ज्वाला igniting उजागर गर्दै छन्। पारित गर्न NFPA 701 परीक्षण विधि एक,
1) नमूनों को औसत वजन 40% वा कम हुनेछ र
2) परीक्षण कोठामा गर्न गिर कि नमूनों को अवशेष को .Fragments2भन्दा बढी सेकेन्ड को लागि बाल्न जारी हुँदैन।
NFPA 701 परीक्षण विधि दुई (over700gsm वा 21oz / वर्ग यार्ड कपडे लागि उपयुक्त ): दुई मिनेट लागि नमूना तल किनारा तल ज्वाला लागू र त्यसपछि छ फिर्ता लिया। NFPA 701 परीक्षण विधि दुई पारित गर्न,
1) .कुनै नमूना परीक्षण ज्वाला पछि2भन्दा बढी सेकेन्ड को लागि अतिउष्ण जारी हुँदैन को नमूना संग सम्पर्क बाट revmove छ;
2) कुनै पनि एकल समतल नमूना को अक्षर लम्बाई 435mm (17.1 मा नाघ्न हुँदैन); जोडेको नमूना 1050mm (43.1 मा) को लागि;
3) .कुनै अंश वा झर्ने परीक्षण उपकरण तल्ला पुगन पछि2भन्दा बढी सेकेन्ड को लागि जल जारी हुँदैन को floorof गर्न नमूनों को अवशेष।
सफाई र जल Leaching प्रक्रिया : जब एक निर्माता दाबी गर्ने कपडा सफाई वा यसको निमित्त प्रयोग गर्न लागू, शुष्क सफाई छन् कि जोखिम अवस्था गर्न subjected गरिएको छ पछि सामाग्री पनि परीक्षण गरिनेछ weathering, पछि यसको ज्वाला प्रतिरोध कायम रहन्छ (3 चक्र) , शोधन (5 चक्र) वा अन्य जोखिम पानी (पूर्ण छैन कम 72 भन्दा घण्टा कोठा तापमान मा ट्याप पानी समावेश पोत जोडतोडले)।
माथिको बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका स्तर बाहेक, त्यहाँ फरक countries.In युरोप र अष्ट्रेलिया केही अन्य मानक हो, उद्योग सबैभन्दा स्वीकृत स्तर फ्रान्सेली, जर्मन र बेलायती स्तर छन्। हालै पनि युरोपेली एन 13773 मानक पर्दे लागि थप साधारण बन्दैछ।
फ्रान्स: NFP 92-503
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-17-2018
ठेगाना: No.999 Xugongqiao Rd, Kunshan Huaqiao, Jiangsu प्रांत, चीन।
सबै भन्दा सार्वजनिक रिक्त स्थान (, अस्पताल, नर्सिंग, विद्यालय, चर्च ओडी सहित प्रयोग कपडे ...
ज्वाला Retardancy को विभिन्न प्रकार
अस्पताल Cubicle पर्दे लौ retardant (उर्फ आगो retardant वा रूपमा छोटो हुन आवश्यक छ ...